किन दुख्छ कान ? यसरी गर्नुहोस् घरेलु उपचार !! | सुदुरपश्चिम खबर
कान दुखाइका लक्षण ःकहिले काहिं कान दुखाइको कारणले गर्दा कानले राम्रोसँग सुन्दैन । केही व्यक्तिहरुका कानबाट तरल पदार्थ पनि आउँछ। कानको दुखाइका कारण आवाज स्पष्ट नसुन्ने, ज्वरो आउने, सुत्न समस्या हुने, कानमा तनाव, चिडचिडेपन, टाउको दुखाई र भोक नलाग्नु जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
कान दुखाइका सामान्य कारणःचोट, संक्रमण, कानमा जलनको कारणले कान दुखाउन सक्छ। बङ्गारा वा दाँत दुख्नाले पनि कान दुख्न सक्छ । इन्फेक्सनको कारण कानभित्र दुख्छ । पौडी खेल्नु, हेडफोन, कटन वा औंला राख्नाले पनि कानको बाहिर इन्फेक्सन हुनसक्छ ।
दुखाइका अन्य कारणहरू ःहावाको चाप, कान फोहोर हुनु, घाँटी दुखाइ, रुघाखोकी, साइनस संक्रमण, शैम्पू वा पानी पस्नाले, कपास राख्नाले, टेम्पोरोमेन्डिबुलर संयुक्त सिन्ड्रोम, कान छेड्ने, दाँतमा संक्रमण कानमा एक्जिमा हुनाले पनि दुख्छ।
चिकित्सा उपचारःयदि तपाईंलाई कानमा तीव्र दुखाइको साथ ज्वरो आएको छ भने डाक्टरकहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् । यसको लागि, डाक्टरले तपाईंलाई केही एन्टिबायोटिक र कानको थोपा दिन सक्छ। दुखाइ कम भएपछि पनि औषधि सेवन गर्न नछोड्नुहोस् । इन्फेक्सन पूर्ण रुपमा निको नभएसम्म औषधि प्रयोग गर्नुहोस् ।
यी चीजहरूलाई ध्यान दिनुहोस् ःयदि तपाईंलाई बारम्बार कान दुख्छ भने केहि चीजहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। उदाहरणका लागि, चुरोट न पिउनुहोस्, कानमा कुनै पनि प्रकारको औजार नलगाउनुहोस्, नुहाइसकेपछि वा पौडी खेलेपछि कान सुकाउनहोस् । धूलो र एलर्जीबाट बच्नुहोस्।
किन दुख्छ कान ?कान दुख्ने धेरै कारण हुनसक्छ । त्यसमा मुख्य कारणहरु निम्न छन्ः१. कानमा इन्फेक्सन वा कुनै एलर्जी भयो भने कान दुख्ने गर्दछ ।२. कानमा मैला जम्मा भयो भने पनि कान दुख्न सक्छ ।३. कानभित्र पानी परेमा समेत कानको दुखाई हुनसक्छ ।
कानको दुखाई वा संक्रमणबाट बच्न के गर्ने ?१. सफा नीमको पातको रसको केही थोपा कानमा हालेमा इन्फेक्सनमा उपयोगी हुन्छ ।